महान बैज्ञानिक स्टिफन हकिङका अति कामलाग्ने भनाईहरु - Enepalese.com
महान बैज्ञानिक स्टिफन हकिङका अति कामलाग्ने भनाईहरु
इनेप्लिज २०७४ चैत १ गते १०:४८ मा प्रकाशित
पुष्कर बराल,वर्तमान युगका महान बैज्ञानिक स्टिफन हकिङलाई संसारमा नचिन्ने को होलान र । तर, अब उनको भौतिक शरीर हामीबीच रहेनन् । उनको बुधबार मृत्यु भएको छ । उनलाई दोस्रो आइन्सटाइन पनि भनिन्थ्यो । उनले आफ्नै निवास युकेको क्याम्ब्रिजमा ७६ वर्षको उमेरमा देह त्याग गरे ।
शारीरिक रुपले अशक्त भएर पनि उनी पुरै युग हाँक्ने बैज्ञानिक थिए । जब उनि २१ बर्षका थिए उनि असक्त भए । डाक्टरले उनलाई न्युरो रोगको कारण प्यारालाईज्ड भएको र २ बर्ष भन्दा बढी नबाच्ने दाबी गरेका थिए तर उनि अरु ५५ बर्ष बाँचेर संसारलाई अचम्मित मात्र पारेनन् भौतिक शास्त्रका ठुला बाज्ञानिक भएर देखाईदिए । विद्यालय जीवनमा उनी अतिनै सामान्य विद्यार्थी थिए भन्ने गरीन्छ । उनको पढाई-लेखाई राम्रो थिएन । उनको भविष्यप्रति शिक्षक तथा परीवार समेत चिन्तित थिए । तर पछी त्यही कमजोर बालक स्टीफन हकिंगको रुपमा संसार विख्यात भए, भौतिक विज्ञानको खोजले ।
अचम्म त के छ भने सन् १९८८ मा हकिङले लेखेको पुष्तक ‘अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम’ पुस्तक प्रकाशित भयो । पुस्तकले विश्वलाई हल्लायो । १० मिलियन भन्दा बढि पुस्तक विक्री भएको जनाईन्छ । पत्रपत्रिकाहरुमा हप्तौ सम्म उनको पुस्तकबारे चर्चा/परिचर्चा भईरहे ।
स्टिफन हकिङले बिभिन्न चरणमा भनेका केहि महत्वपूर्ण भनाई वा बाणीहरु पढौ ! यसले हाम्रो जीवननै बदलीदिन सक्छ ?
१-मानिसले सबैभन्दा ठूलो सफलता बात गरेरै पाउँछ, धेरै विफलता पनि बात नगर्नेहरुलाई नै प्राप्त हुन्छ । मानिसलाई हमेशा कुरा गरिराख्नु जरुरी छ ।
२-आफ्ना बच्चालाई टिप्स दिँदै उनले भनेका छन्, ‘पहिलो कुरा त हमेशा तारालाई हेर, न कि आफ्नो पैँतालालाई । दोस्रो कुरा कहिले पनि काम गर्न नछोड, कामले तिमीहरुलाई बाँच्ने आधार दिन्छ ।
३-जसलाई आफ्नो IQ क्षमताप्रति खुबै घमण्ड हुन्छ, सोच्नुस् तिनीहरु प्राय: हारेका व्यक्ति हुन्छन् ।
४-म एउटा यस्तो बच्चा हुँ, जो कहिल्यै बुढो हुन सकेन । म अझै पनि किन, कसरी भन्ने प्रश्न गर्छु ।
५-मैले नोटिस गरेको छु, यस्ता मानिसहरु जसले सोच्छन् कि भाग्यमा जे लेखेको छ, त्यही हुन्छ । यस्ता मानिसहरुले सडकमा पाइला राख्नुअघि पनि हिच्किचाउँछन् ।
६-ज्ञान यस्तो शक्ति हो, जसले तपाईंमा परिवर्तनलाई स्वीकार्ने क्षमताको विकास गर्छ ।
७-म राम्रो विद्यार्थी थिइन । म कलेजमा धेरै समय विताउदिन थिएँ । म स्वंममा रमाउनमा धेरै व्यस्त थिएँ ।
८-मसँग यति धेरै छ कि, म गर्न चाहन्छु । मलाई समय वर्वाद गर्नु घृणा लाग्छ ।
९-हामी एक औसत तारका सानो ग्रहमा बस्ने बाँदरको एक उन्नत नस्ल हौ । तर हामी ब्रम्हाण्डलाई सम्झन सक्छौ । यसले हामीलाई खास बनाएको छ ।
१०-हामी आफ्नो लोभ र मूर्खताको कारण स्वंमलाई नष्ट गर्ने खतरा मोलिरहेका छौं ।
११-तपाई विकलाङ्ग हो वा अपाङ्ग, त्यो तपाईको कुनै गल्ती होइन । साथै यसका लागि दुनियालाई दोष दिनु र ईश्वरसँग दयाको अपेक्षा गर्नु सही होइन । बस्, तपाईभित्र सकारात्मक उर्जा र विचार हुनुपर्छ ।
१२-यदि कुनै मानिस शारीरक रुपले अपाङ्ग छ भने, उनीहरु आफ्नो मनबाट अपाङ्ग वा विकालाङ्ग हुनु हुँदैन । मेरो विचारमा उनीहरुले यस्तो गतिविधिमा ध्यान दिनुपर्छ, जसले एक शारीरिक विकलाङ्ग व्यक्तिलाई थप बाटा नपुर्‍याओस् ।
१३-यदि कसैले तपाइसँग गुनासो गर्छ, कि तपाइले कुनै गल्ती गर्नुभयो । उसलाई भन्नुहोस् कि यो राम्रो भयो । किनभने बिना गल्ती वा त्रुटी न तपाई न म यस धर्तीमा रहन सक्छु ।
१४-कार्यले तपाईको उदेश्य र अर्थ बताइदिनेछ । र, यसबिना जीवन सून्य छ ।
१५-जीवन साह्रो दुखद हुनेछ, यदि हामीले हाँसो-ठट्टा गरेनौं भने ।
नोट-बिभिन्न समाचार र स्रोतको सहयोगमा तयार पारीएको